FIFA oo beenisay in Lionel Messi uu musuq-maasuq ku qaatay abaal-marinta The Best – Gool FM
(World) 26 Sebt 2019. Xiriirka Kubadda cagta Adduunka ee FIFA ayaa beeniyay in qalad ama caddaalad-darro ay ku dhacday qaabkii loo doortay xiddiga Barcelona ee Lionel Messi oo Isniintii loo magacaabay laacibkii ugu fiicnaa sanadka ee FIFA The Best.
Kabtanka Nicaragua ee Juan Barrera ayaa sheegay in uusan isagu u codeyn Messi, hase yeeshee uu la yaabay markuu arkay codkiisii halka uu maray, waxaana sidoo kale codeyntan lagu doortay Messi ka qayb galay Tababareyaasha Xulalka Qaranka, Kabtannada iyo weliba Wakiillo ka socday Saxaafadda.
FIFA ayaana sheegtay in Lionel Messi uusan musuq-maasuq ku qaadan abaal-marinta xiddiga adduunka ee The Best.
“Waan hubinnay dhammaan dukumiintiyadii codeynta ee ay soo direen xiriirka Nicaragua, waxaana dhammaan dukumiintiyadaasi ay ahaayeen kuwo la soo xaqiijiyay oo ay ku yaalleen tiimbaraha xiriirka kubadda cagta Nicaragua” sidaa waxaa yiri Afhayeen u hadlay xiriirka FIFA.
“Sanadkii hore waxaan u codeeyay Messi, balse sanadkaan uma codeyn, macluumaadka la iga gudbiyayna waa qalad ee ahaa inaan 1. doortay oo codkeyga siiyay Messi, kaddibna Sado Mane (2) kaddibna Cristiano Ronaldo (3)” sidaa waxaa warbaahinta u sheegay Kabtan Barrera.